トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Mail kubva nepachinko yokumusoro anobatsira tafura kusarudza
In nepachinko parlors, yava akatuma bhizimisi e-mail zuva sezvo uchishandisa mabasa. E-mail ndiyo chikamu, mangwanani akazaruka pamberi uye zvemasikati, uye rava vazhinji nepachinko yokumusoro kutumira manheru uye usiku nguva mana. Munguva chiitiko chikuru, zvingaita kupfuura kuwedzera. Tsamba kurwira hapana na rimwe zuva akadaro, achitaura anobatsira zvakanaka tsamba, ndiye usiku tsamba asati nokuvhara rakazaruka pamberi mangwanani tsamba.
First, mangwanani tsamba, asi ndinoda kuramba akatarira kupfuura zvakasimba-mail. Chiitiko womuenzaniso uye chiitiko wakaitwa nguva zuva kana, ndiyo nzira hwomukova Xintai, nokuti hunogara pamusoro zvikuru mangwanani tsamba, iwe chengeta nani kuona zvakasimba.
Uyezve, muenzaniso kuti chaifadza ruvara uye kushinga vatambi, hapana mubvunzo funga kuti muenzaniso aisa simba pazuva iroro. Asi ndinoda kuona kuti, panyaya dzakawanda mazuva chiitiko muenzaniso ndiye, ari titular chiitiko womuenzaniso, pane nyaya pakupora muchina.
nezuva mangwanani tsamba, unogona kuona zvakare kuburikidza vakadaro Gase chiitiko yokutevedzera. Uye, kuti nyore kuwana zvikuru tsamba, ndiko chitoro nechido. Kunyange chaiye mabhizimisi, kana kuva kujairika kushongedzwa vakakomba wokuenzanisira zita, panyaya apo Ruvara mabviro panguva chacho kana vakachinja kuti tsvuku uye dema, kuti nyaya iri nomwoyo wose muna chiitiko zuva, pane zvakawanda nyaya yakwidzwa I.
mangwanani tsamba somunhu nepachinko yokumusoro, nokuti bhizimisi kunoreva kukwezva vatengi, chikamu inogutsa pane rumwe rutivi, unofanira kumira panze. Uyezve, tapota ona Cherechedzawo mashoko.
Somuenzaniso, panyaya aiming bhora kubva nharaunda zvakanakisisa, kana uchigona pane musoro chivimbo, zvisina kufanira kukumbira, akadai kuti ari payout hwakasimba uye kuputika payout, nezvimwewo, iwe guru nguva kunze yatovapo, sezvo pane zvizhinji zviitiko kumhanya zvainanga zviitiko, ndiyo pfungwa pakushandisa shoko chinodiwa.
Next, ndinoda kusiya nokusimbisa neindaneti ndiyo tsamba usiku kununurwa namahwindo usati. The
usiku tsamba , Sezvo yava dzakanyorwa ayo sunrise bhora kuera uye rakatevera zuva chiitiko ruzivo, zvinobatsira kufunga pamusoro kurwa divi mangwana. Zvisinei payout chepamusoro, payout nekuti ungadaro neawakatumirwa Te shoma plus ndinofunga zvakanaka akakunda murayiro nezve vasingatendi chose. Zvisinei,
, kuti kuuya akaisa muenzaniso zita ndiye muenzaniso ainzi chaizvoizvo kunze, nokuti akapotsa, vangati pfungwa. Mukuwedzera, zvatinosiita mugari tsamba vamwe pane nguva, nekuti kunewo nyaya apo pane mashoko anokosha, tapota ivai nechokwadi kuti aone.
kunyanya sezvizvi, kuuya mashoko akakosha akatuma, zvinoratidzika kuti vakawanda rapfuura manheru kubva masikati. Madekwana, nokuti nguva kuti mashandiro achikwira, zvichaita muropa tumira kuyeva nayo, vaya akaona mangwanani inotengwa.
saka iwe buda yezvakaita nepachinko yaiitirwa ari tsamba, kuverenga muzvitoro kuti tsika, chii chingakubatsira kana mashoko, uye edza kuongorora iwe tumira anova zvakunoreva.